Fatahaadda Beledweyne oo saameysay Waxbarashada [Sawirro]
BELEDWEYNE, Soomaaliya - Fatahaadda uu wabiga Shabeelle ku sameeyay qeybo kamid ah dalka ayaa saameyn xooggan ku yeeshay ku dhawaad Hal Milyan oo qof, kuwaasi oo hadda xaalad adag oo dhanka nolosha soo wajahday.
Magaalada Beledweyne oo ah meesha ugu daran ee fatahaadda ay ku dhufatay ayaa waxaa ku guryo waayey boqolaal kun oo qof, iyadoo biyaha wabiga ay burburiyeen dhismooyin ay Iskuullo kamid yihiin.
Saraakiisha maamulka magaalada ayaa waxay sheegeen in 10 Iskuul oo ku yaalla Beledweyne hadda ay xirmeen, iyadoo taasi ay keentay dib u dhac ku yimaada Imtixaanka sanad laha ee ardayda.
Axmed Dhaqane oo ah Gudoomiyaha Iskuuladda gaarka loo leeyahay ayaa u sheegay Warsidaha Garowe Online in arday gaaraysa 10,000 [Toban Kun] ay seegeen Imtixaankii Final-ka oo lagu waday inay galaan Todobaadkan.
Dhaqane ayaa sababta ku sheegay in dhismooyinka ay degan yihiin Iskuuladda ay biyo fariisteen, halka qaarna ay burbureen, taaso keentay inay sii wadi waayaan adeegii waxbarashada kadibna ay fasaxeen Ardayda.
Madaxweyne Farmaajo dhawaan booqday Beledweyne, isagoo hogaaminayo gudiga uu Ra'iisul Wasaaraha Khayre u magacaabay wax ka qabashada fatahaadaha dalka.
Dowladda Soomaaliya oo sida NGO Lacag ku deeqday Gurmadka Fatahaadda
Soomaliya 02.05.2018. 19:48
Fatahaadda ayaa saameysay boqlaal kun oo shacab ah kuwaasi oo ku dhibaataysan...
Shir caalami ah oo lagu soo gaba-gabeeyay Muqdisho
Soomaliya 21.05.2018. 11:25
Dagaal culus oo ka dhacay Beledweyne [Fah-faahin]
Soomaliya 15.06.2018. 01:45